Itoobiya ayaa shuruud ku xirtay wada xaajood lala galo dalka Sudan in marka hore ciidamada… – Hagaag.com
Itoobiya ayaa shuruud ku xirtay wada xaajood lala galo dalka Sudan in marka hore ciidamada…
Posted on 21 Janaayo 2021 by Admin in World // 0 Comments
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Dina Mufti, ayaa sheegay in dalkiisu uu diidan yahay wax wada xaajood ah oo lala galo Suudaan illaa ay ciidamadooda kala baxaan meelihii ay la wareegeen 6-dii November.
Mufti ayaa dafiray jiritaanka wax heshiis ah oo labada dal dhexmaray oo ku saabsan soo galitaanka ciidamada Suudaan ee dhulka Itoobiya, isagoo sharraxaad ka bixiyay “waxa lagu heshiiyay labada dal waa xakamaynta xuduudaha iyo ka hortagga dhaqdhaqaaq kasta oo xoogagga nabad-diidka ahi ka dhex wadaan xuduudaha labada dal.”
Mufti ayaa sidoo kale xaqiijiyay diidmada dalkiisa ee ah inuu la isku xiro biyo xireenka Renaissance Dam iyo xuduuda ay la wadaagaan Suudaan, wuxuuna sheegay in biyo xireenka uu waxtar u leeyahay dadka reer Suudaan, abaabulka lagu buuxinayo ee labaadna uu noqon doono waqtigiisa.
Dhiniciisa, xubin ka tirsan Golaha Madax-bannaanida Ku-meel-gaadhka ah ee Suudaan, Siddiq Tower, wuxuu sheegay in Suudaan aysan ka jawaabi doonin wax kasta oo dhexdhexaadin ah oo looga hadlayo muranka ka taagan xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya.
Tower ayaa carabka ku adkeeyay khudbad uu ka jeediyay Koonfurta Kordofan in dalkiisa uusan bixin doonin wax dhul ah oo Suudaan lledahay, isagoo beeniyay jiritaanka muran xuduudeed oo u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya.
Abdel Fattah al-Burhan, Gudoomiyaha Golaha Madaxbanaanida isla markaana ah Abaanduulaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa sheegay in dalkiisu uusan dooneyn inuu dagaal la galo Itoobiya ama dal kale, laakiin uusan hal taako oo dhulkooda ka mid ah aan la lumin doonin.
Kulan uu la qaatay taliyayaasha ciidamada, Al-Burhaan wuxuu carabka ku adkeeyay rabitaanka Suudaan ee ah in la gaaro heshiis ilaaliya xuquuqdooda sharciga ah iyo in la calaamadeeyo xuduuda.
Al-Burhan wuxuu xaqiijiyay – sida ay ku warantay Wakaaladda Wararka Suudaan – in ciidanka la geeyay gudaha dhulka Suudaan iyaga oo si buuxda ula shaqeeyay hay’adaha siyaasadeed ee gobolka.
Khartuum waxay leedahay “maleeshiyada Itoobiya” waxay la wareegeen dhulalka beeraleyda reer Suudaan ee ku yaal aaga Fashaqa kadib markii xoog looga saaray halkaas, waxayna ku eedeeyeen ciidanka Itoobiya inay taageeraan qawlaysatadaas, taas oo Addis Ababa ay beenisay oo ay sheegtay in kooxahani yihiin kuwo sharci-darro ah.